Alarobia 09 Janoary 2019. – FJKM
Alarobia 09 Janoary 2019.
2 Samoela 2.12-32
Miady ny mpomba ny mpanjaka roa izay notarihan’ny mpitari-tafika roa lahy .
1-Anton’ny ady .
Teo amoron’ny kamory tao Gibeona , 10 Km avaratra andrefan’i Jerosalema izany no niseho. Fisorohana ny fiitaran’ny fahefan’i Davida amin’ny avaratr’i Joda no nanetsika an’i Abnera hankany.Feno fahatokisan-tena tokoa izy rehefa samy nipetraka teo an-dafin’ny rano. Toa kilalao no ilazana azy eto, nefa tena ady mihatra aman’aina.
2-Vokatry ny ady
Fanaovana sorona miaramila no manaitra eto, satria tsy nisy nivoaka velona izy 24 lahy hany tsy fantatra ny hoe; iza no nandresy. Nanaomboka teo noho izany ny ady. Fahaverezana olo-manga toa an’i Asahela no hita eto. Nitompo tamin’ny marina sy ny heriny izy ka matin’ny tsy nampoizina. Fahafatesana olona anjatony no voalazan’ny fanisana nataon’i Davida ka 19 tamin’ny azy sy 360 ny an’ny ankilany.
I Abnera no namarana ny ady tamin’ny teny , izay mety azo raisina ho fanilihana tsiny na fiakena faharesena : »handany mandrakizay va ny sabatra? », hoy izy. Fa na toy inona na toy inona firehitry ny ady , rehefa ny mpitarika no mampitsahatra izany , mitsahatra ny ady. Naman’ny kofehy manara-panjaitra ihany ny vahoaka sy ny miaramila entiny .